China EEC L3e Electric Motorcycle mpanamboatra sy mpamatsy |Yunlong
EEC L3e Electric Motorcycle
Fametrahana: Ny môtô elektrika Knight no dingana manaraka amin'ny fivoaran'ny môtô.Ny hafainganam-pandeha mahavariana amin'ny RPM rehetra, ny tsipika maranitra ary ny ergonomika ara-panatanjahantena dia manova ny dianao isan'andro ho mampientam-po.
Ho an'ny fitetezam-paritra isan'andro, mitondra fiara lavitra.Manolora mitondra fiara haingana sy tezitra, mitondra fiara ho an'ny bebe kokoa.
Tsy tokony ho tafahitsoka ao anatin’ny fahasahiranan’ny lalana ny fiainantsika.Avelao ny tenanao haka aina.
Fepetra fanaterana:20-40 andro taorian'ny nahazoany petra-bola
Fahaizana famatsiana:2000 units/mois
entana :16 vondrona ho an'ny 1 * 20'GP, 32 vondrona ho an'ny 1 * 40' HQ.
Details momba ny fiara
Tohanana tongotra:Tohano ambany tongotra, fijanonana stable mora sy mora.
Batterie:Ampitomboy ny toeran'ny bateria.Batterie lithium 72V86Ah, azo antoka, lavitra
rafitra frein:Alohan'ny sy aorian'ny kapila lehibe frein, fiarovana escort.Rehefa vonjy taitra braking frein, dia afaka ihany koa frein saro-pady sy milamina.
Seza:Hatevina avo rebound fahatsiarovana sponjy lasely, matevina sy mahazo aina fahatsapana, mifanaraka amin'ny contour ny andilany, mahazo aina kokoa tsy reraka mipetraka ela.
Tsotra sy kanto, hoso-doko avo lenta amin'ny fiara, famolavolana avo lenta eo anoloana, ondana seza tsara ho an'ny olona roa, mitondra traikefa amin'ny bisikileta mandritra ny andro manontolo.Fast drainage, gripa mafy.
Motera mahomby avo lenta, mitahiry herinaratra mamonjy avo vaovao.Motera herinaratra mahery vaika mahery vaika, fampidirana ireo loharano isan-karazany, ary famolavolana fanatsarana ny rafitra anatiny mba hahatratrarana ny fitomboan'ny maotera manan-tsaina, hampihenana ny fatiantoka amin'izao fotoana izao, ny herin'ny maotera mahery vaika fanitarana, ny fampisehoana ambony dia mahatonga ny fiara ho azo antoka kokoa. .
Efijery LCD HD, valiny haingana tsy misy alokaloka misintona, kalitao mazava sy miorina tsara, mbola mazava tsara ny taratra hazavana matanjaka, ny toe-javatra mitondra fiara raha vao jerena, ka manahy kokoa ny dia.
Rafitra fanalefahana fahatairana
Front sy aoriana rafitra absorption fahatairana, tsy matahotra ny korontana.Be dia be ny fanivanana pothole lalana vibration, bisikileta mahazo aina kokoa.
Sharp telo-maso headlamp famolavolana, ny jiro isan-karazany dia lava, maso-misarika lamaody, aoka tsy hatahotra ny maizina.Sahisahy stylish rambony jiro. More mangidy, mamiratra sy mamirapiratra kokoa, dia hita avy lavitra, mahomby fanatsarana ny fiarovana fanondroana ny alina mitondra fiara.
Vacuum pneu anti-skid famolavolana, frein saro-pady, mafy gripa. Manangana ny kalitao avo fingotra, ny thickening manakana ny tsilo vy sosona tariby, ny groove famolavolana, manome ny tsara fivoahana rano ho an'ny kodiarana.
Fanaraha-maso lavitra manan-tsaina, ataovy azo antoka kokoa ny fiaranao.Multi-function remote control anti-theft alarm, endrika tsotra, mahazo aina amin'ny fitazonana, afaka manidy ny fiara amin'ny lakile iray, fikarohana fiara lavitra, mamoha ny hidy amin'ny lakile iray, miasa fanairana manohitra ny halatra.
Fiara anti-slip multifunctional multifunctional, mba hihena ny tahan'ny tsy fahombiazana, mba ho tsara kokoa ny fikarakarana, tsy dia misy fanoherana, miara-miasa tanteraka amin'ny fanombohana haingana rehetra.
Ny vokatra ara-teknika
EEC L3e Homologation Standard Teknika Specs
Kodiarana fototra (mm)
Lanja amin'ny tady (Kg)
86Ah Lithium Battery
20A On-board Charger / 6 ora (220V)
Φ240 kapila / Φ220 kapila
Ny fiasan'ny CBS (System Braking Combination)
Eo anoloana: 130/60-13 aoriana: 130/60-13
Mariho tsara fa ny fanitsiana rehetra dia natao ho an'ny fanondroanao fotsiny mifanaraka amin'ny EEC homologation.
teo aloha: EEC L6e Electric Cabin Car -X5
Manaraka: EEC L7e Electric Cargo Transport Car
EEC L7e Fiara entana elektrika Y2-P
EEC L1e bisikileta elektrika